Qatar Airways oo dib u billaabaysa duulimaadka Muqdisho | Keydmedia
Qatar Airways oo dib u billaabaysa duulimaadka Muqdisho
Shirkadda ayaa sheegtay inay adeegga duulimaadka Soomaaliya u isticmaalayso diyaarado casri ah [Airbus A320], taasoo leh 12 kursi oo business class ah 120 kursi oo economic class ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Qatar Airways ayaa ku dhawaaqday Maanta inay 6-da September dib u billaabayso duulimaadka Soomaaliya, waxayna saddex jeer Todobaadkii duulimaad toos ah ku sameyn doontaa Muqdisho, oo ah Magaaladda ugu dadka badan dalka.
Gudoomiyaha Shirkadda Akbar al-Baker ayaa ku dhawaaqay dib u billaabidda duulimaadka, oo mudo dhowr bilood ah hakad ku jiray sababo la xiriirka caabuqa COVID-19, oo saameyn xoogann aduunka ku yeeshay.
0 Comments Topics: muqdisho qatar airways turkish airlines
Afar shil oo diyaaradeed ayaa sanadkan ka dhacay Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, taasoo dhalisay su'aallo ku saabsan bad-qabka hawada dalka oo noqday mid diyaarad kasta isaga duusho.
Mooshin loo gudbiyay gudoonka Baarlamaanka
Warar 14 September 2020 17:56
Gabar la kufsaday kadibna dabaq laga soo tuurey
Warar 12 September 2020 15:52
Farmaajo oo la kulmay Madaxda Maamullada
Warar 10 September 2020 17:35